प्रिमियर लिगमा आज म्यानचेस्टर युनाईटेड र चेल्सी भिड्दै - Emountain TV
प्रिमियर लिगमा आज म्यानचेस्टर युनाईटेड र चेल्सी भिड्दै
कार्तिक ८, २०७७ पढ्न २ मिनेट
एजेन्सी, ८ कार्तिक । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल इपिएलमा आजराती म्यानचेस्टर युनाईटेड र चेल्सीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । म्यान्चेस्टर युनाईटेडले घरेलु मैदानमा चेल्सीको सामना गर्नेछ ।
युनाईटेड र चेल्सीबीचको खेल नेपाली समय अनुसार सवा १० बजे सुरु हुनेछ । घरेलु मैदानमा युनाईटेड चेल्सीलाई हराउने दाउमा हुनेछ । तर, बलियो चेल्सीलाई हराउन युनाईटेडलाई कठिन देखिएको छ । युनाईटेडलाई घरेलु मैदानको फाइदा भने हुनेछ ।
यस सिजन मिश्रित नतिजा निकाल्दै आएको युनाईटेडले ४ खेलमा ६ अंक जोडेको छ । १५ औं स्थानमा रहेको युनाईटेड चेल्सीलाई हराएर अंक तालिका सुधार गर्न चाहन्छ । चेल्सीले ५ खेलमा ८ अंक जोडेको छ । तालिकाको नवौं स्थानमा रहेको चेल्सी पनि अंक जोड्ने दाउमा हेको छ ।
खेलकुद‐मा वर्गिकृतChelsea, EPL, ManchesterUnited
आईपीएल टी–ट्वान्टीः मुम्बई इन्डियन्ससँग १० विकेटले चेन्नई सुपर किङ्स पराजित
आईपीएल क्रिकेटमा पन्जाबले हैदराबादलाई १२ रनले हरायोे
नेपालले चीन जस्तो छिमेकीबाट किन लाभ लिन सकेन ? चिनियाँ विकासको छाँया नेपालमा किन परेन ? (भिडियोसहित)
प्रिमियर लिग फुटबलमा आज म्यानचेस्टर युनाईटेड र आर्सनल भिड्दै
प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटनह्याम भीड्दै
च्याम्यिन्स लिग : बार्सिलोना र चेल्सी बराबरीमा रोकिए